Ukukhawuleza: Ilula, i-SaaS engabizi kakhulu Inkxaso yoMthengi | Martech Zone
Ukukhawuleza: I-SaaS elula yokuXhasa abaxhasi
NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Kudliwanondlebe lwethu noIFomstack ngolwesiHlanu, besithetha nje malunga nokuba zizinkulu kangakanani iiapps eziqhubeka ukubetha imarike ezibonelela ngezisombululo ezingabizi kakhulu ezinokukhula kunye neshishini lakho. Njengoko ndandibhalela umphuhlisi malunga nomba esasinayo nge-plugin yakhe, ndangena kwinkqubo yamatikiti ababeyiphumezile, Ukukhathaza.
Ukuba uyishishini elikhulayo, le isenokuba yinkqubo efanelekileyo kuwe kuba bahlawulisa i $ 5 nje ngomsebenzisi. Okwangoku, le nkqubo idityanisiwe kunye ne-Envato, usapho lweplagi yewebhu, umxholo kunye neendawo ze-snippet, ukuze abaphuhlisi babonelele ngenkxaso kubathengi babo. Inazo zonke izinto ezifunekayo kwivenkile yophuhliso encinci-ene-bug fixer tracker, i-FAQ kunye nesiseko solwazi, izaziso ze-imeyile kunye neempendulo, kunye nokubekwa phambili kwetikiti.
Ukukrakra kukhuthaza ezi zibonelelo zilandelayo:
Ibhalwe -Ukuchana kukuvumela ukuba ukhethe isizinda esingezantsi kwaye wenze ilogo yakho ukuba ifane nophawu lwakho ngamava wabathengi angenamthungo.
Uhlobo lwe-Envato I-Ticky yenzelwe ukudibanisa ngokulula kunye ne-Envato, isenza kube lula ukuxhasa kunye nokuqinisekisa ukuthengwa kweSuku lokuQala.
Ukonga ixesha -Uyilo olucocekileyo lokucoceka kunye nojongano lwenza ukuba inkqubo yenkxaso ibe lula kwaye inomdla kuwe kwaye - okona kubaluleke kakhulu - abathengi bakho.
Ayinablogi -Gxila ekuxhaseni abathengi bakho, hayi ekulawuleni usetyenziso. Ukukhawuleza kunika izixhobo zenkxaso oyifunayo. Akukho bloatware.
Ezingenakunciphisa -Ku- $ 5 nje kuphela ngomsebenzisi ngenyanga -kwaye akukho ndleko zifihliweyo- I-Ticky ikwenza ukuba ubonelele ngenkxaso kubathengi be-stellar ngexabiso le-iced vanilla latte enye ngokudubula.
onombala -Idashboard elula yeTicky elula, enomdla ikunika izixhobo zokuhlala uhlelekile, uqhuba ngokukuko kwaye unikezela ngenkonzo yokubaleka ephezulu.
tags: indawo yokuphendulaInkonzo eyenzelweuxhaso lwabathengiFAQulwazi lolwaziitikiti lenkxasoUkunika amatikiti